ရခိုင့်အတွေးအခေါ်: ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော့ဦးနှောက် ( အပိုင်း .၁ )
ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော့ဦးနှောက် ( အပိုင်း .၁ )
အောက်ကအကြောင်းအရာတိကို ကျွန်တော်ရွီးရေ အတွက်နဲ့ ကျွန်တော့အကြာင်းကို အနည်းငယ်ချေခန့် ပြောပြမိတ်ဆက်သင့်ပါ ရေလို့ထင်မိပါရေ။ လူတိုင်းကိုယ့် အကြောင်းကိုပြောစွာနဲ့ နာမယ်ကို မိတ်ဆက်တတ်ကတ်ပါရေ။ ပြီးကေ အလုပ်ကြောင်း၊ မိသားစု၊ နီထိုင်ရေအရပ်.. ယင်းပိုင် အစချီလို့မိတ်ဆက်ဖြစ်တတ်ကတ်ပါရေ။ကျနော့ကို ၀ရေလို့ပြောကတ်ပါရေ။ အမှန်ဝလို့ပါ။ အရပ်ပုလို့ ဂျပုလို့လည်းအခေါ်ခံရပါသိရေ..။အသက်ကတော့ လူငယ်လူလတ်ပိုင်း..လူပျို…။ နာမယ်စွာ ခေါ်ဖို့သတ်မှတ်ပဥတ်ချက် နာမ်စားတစ်ခုရာဖြစ်တေအတွက်နဲ့ အွန်လိုင်းက မိတ်ဆွေတိကို ကျွန်တော့နာမယ်ကို မပြောပါဗျာလ်။ နာမယ်ကအေနီရာမှာ အရေးမကြီးလို့ယူဆပါရေ။ အရေးကြီးရေလို့ထင်ရေလူတိ ကျွန်တော့နာမယ်ကို မောင်မောင်ချေလို့ မှတ်ထားလို့ရပါရေ၊ နာမယ်ကို အမှန်တကယ်မပြောဝံ့လို့ အေအကောင်က လဘာဂျာရာဝေ.. သတ္တိရှိရေအကောင်မဟုတ် လို့ထင်ကေတော့ခါ ထင်ရေလူတိ မှားဖို့လီဖို့မဟုတ်ပါ။
မောင်မောင်ချေကျွန်တော်စွာ စာအုပ်တိအများကြီးမဖတ်ဖူးပါ။ စာဖတ်ချင်ရေ စိတ်တော့ရှိဖူးပါရေ။ တတ်ချင်လို့၊ သိချင်လို့တော့မဟုတ်။ လူများတိအထင်ကြီးစွာကို ခံချင်လို့ပါရာ။ ယင်းတွက်နဲ့ ကျွန်တော်မောင်မောင်ချေသည် စာတတ်ပီတတ်၊ တစ်ယောက်မဟုတ်ပါ။ စိတ်ထဲက မြင်ရာ၊ထင်ရာတိကို လက်လှမ်းမှီသလောက်တင်ပြခြင်းပါ။ တင်ပြလို့ လတတ်ခံရေလို့ပြောကေ မတတ်နိုင်။ယင်းပိုင်အဖြစ်မျိုးကို အဖြစ်မခံနိုင်။လောကမှာ မောင်မောင်ချေ ဖြစ်ချင်၊လုပ်ချင်၊ကြုံဖူးချင်စွာတိ အများကြီး….။ ဂုထိမရောက်လာသိ..မဖြစ်လာသိ…အသက်အရွယ်အရ ကြုံဖူးသင့်သလောက် မကြုံဖူးသိ..။
ငါဇာဖြစ်လို့ ဖြစ်ချင်စွာတိ မဖြစ်နီစွာလေ၊မဖြစ်သိစွာလေ၊..ဆိုရေအတွေး ဦးနှောက်လို့ခေါ်ရေ စဉ်းစားစက်ထဲကိုဝင်လာကေ ကိုယ့်ဘ၀ရည်မှန်းချက်ချခစွာတိကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖူးရေ။ သုံးလေ့ သုံးသတ်နီတုန်းပါ။ လူတိက ဘ၀ရည်မှန်းချက်ကို တစ်ခုတည်းသတ်မှတ်ပနာ ကြိုးစားကေ.. ငုတ်မိသဲတိုင်.တက်နိုင်ဖျားရောက်..လိုချင်ရေရည်မှည်းချက်ကို ရောက်နိုင်ပါရေလတ်။ မောင်မောင်ချေ ကျွန်တော်က ယင်းပိုင်မဟုတ်ပါ။ အချေခါကပင် ရည်မှန်းချက်တိအများကြီးထားဖူးခပါရေ။ ဆရာဝန်ဖြစ်ကေ ဘ၀ကောင်းစားရေလို့ဆိုလို့ ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်ရေလို့ လူကြီးတိမီးကေ ဖြေဖူးပါရေ။ အပ်စိုက်ချက်တစ်ရာ တူချက်တစ်နှက် လို့ပြောလို့ အင်ဂျီနီယာကြီးတစ်ယောက်လဲဖြစ်ဖူးချင်ခပါရေ။ တီဗွီဖန်သားပြင်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ရို့ကို မြင်ဖူးလို့ စစ်ဗိုလ်သင်တန်းလည်းတက်ဖူးချင်ပါရေ။ ပျိုတိုင်းကြိုက်တေနှင်းဆီခိုင်လို့ခေါ်ရေ သင်္ဘောသားတိဘ၀ကို လည်းအားကျဖူးပါရေ။
တခါတခါလေ့ ဘ၀ရည်မှန်းချက်တစ်ခုလည်း မရှိရေအချိန်တိကိုဖြတ်သန်းဖူးပါရေ။ အဖြေကတော့ဇာဖြစ်လို့ ရည်မှန်းချက်ထားရဖို့လဲ ဆိုရေ မီးခွန်းစ၀င်လာလို့ပါ…ပြဿနာက ယင်းကစပါရေ။ လူတိစွာ ဘ၀သာယာဝပြောရေးအတွက် ကောင်းနိုးရာရာ၊ သင့်တော်ဖို့စွာ၊ ၀ါသနာပါစွာကို ရွီးချယ်လိုိ့ ဘ၀ရှင်သန်ကတ်ရရေ ဆိုရေအတွေးပါ။ ဒုက္ခအစ အတွေးက… ဒုက္ခအစသိခြင်းက လို့ဆိုကတ်ပါရေ။ အများကြီးသိကေ အများကြီးဒုက္ခ ဖြစ်တေလို့လဲကြားဖူးပါရေ…။ ဒုက္ခကို ဒုက္ခမှန်း …ပြဿနာကို ပြဿမှန်းသိကေ…သောကငြိမ်းချမ်းရေးကို ရနိုင်ဖို့လို့တချို့ကလဲပြောကတ်ပါယင့်။ ဟုတ်လီဖို့လား..???။
ဇာပိုင်ပင်ဖြစ်ဖြစ် လူဆိုစွာအဆုံးမှာ သီကတ်ရစွာဗျာလ်။ ဆရာဝန်လည်းသီရေ ...အင်ဂျင်နီယာလည်း သီရရေ..ကျောင်းဆရာ…စာရေးစာချီ..နိုင်ငံရေးသမား.. နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရားပြရေဘုန်းကြီး… အရက်သမား.. တိပါမကျန် သီခြင်းတရားနဲ့ အဆုံးသတ်ကတ်ရစွာဗျာလ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မသီခင်အထိ ရှောင်လွဲလို့မရရေ ယင်းသီခြင်းတရားကို မကြုံတွိချင်ပါ။ တခါခါလေ့ သီလကေ ဇာပိုင်ခံစားရလေ လို့လဲ သီခြင်းအရသာကို စဉ်းစားကြည့်ဖူးပါရေ။ သီလရေနောက်ပိုင်းမှာ ဇာဆက်ဖြစ်လေ…???။
ယကေ ယင်းသီလခကတ်တေလူရို့တိစွာ သူရို့ဖြတ်သန်းခရေ ဘ၀တိကို ကျေနပ်ခကတ်လာ?..။ ကျေနပ်နပ် မကျေနပ်နပ်.။ လူသားအားလုံးစွာ မလွဲသာမရှောင်သာလို့ပင်ဖြစ်ဖြစ် ..အသက်ရှင်သန်မှုကို ထာဝရပိုင်ဆိုင်ချင်ရေပင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်မြတ်နိုးလို့ပင်ဖြစ်ဖြစ် အဂုအချိန်မှာအသက်ရှင်သန်မှုဘ၀ကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွိ နီကတ်ရရယ်။
ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်စွာ မီးခွန်းက ယင်းလူသားတိအားလုံးထဲမှာ အသက်ရှင်နီကေပင် လူဗျာလ်လာ..?။ လူဆိုစွာဇာလေ..???။ ထမင်းနှစ်ထပ်စားကေပင်လူလို့ခေါ်လို့ရလာ..??။ထမင်းစားတိုင်း လူလို့ခေါ်လို့ မရလို့ဆိုကေ ဇာပိုင်လူအမျိုး အစားစွာ လူအစစ်လ..ဲ??။ ဇာပိုင်မျိုးဘ၀စွာ အဓိပ္ပါယ်ပိုလို့ ပြည့်စုံလေ..?။ ပြည့်စုံကေ ပင်ယင်းလူကို လူလို့ခေါ်လာ...ခေါ်လို့ရလာ..အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝလခဗျာလ်လာ..??။စဉ်းစားချက်ကို အဖြေထုတ်မရ ဂဠုန်ဆားချက် အခြေအနေကိုဆိုက်ရောက်လားပါရေ..။ယင်းတွက်နဲ့ ကျွန်တော် အေမီးခွန်းတိကို ကျွန်တော့မွီးသဖခင် ဦးဖေသန်းကို ဦးခိုက်လို့ အတည်တကျအဖြေတောင်းဖူးခပါရေ…မီးမြန်းဖူးပါရေ။ ဖတ်နီကျ နွယ်နီမဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကိုကျော်လို့ ကျွန်တော့ကို မျက်မှန်ဘောင်အောက်က မျက်မှောင်ကုတ်လို့ ကြည့်ပြီးကေ …လဥပဒေတတ်…။ မင်းနောက်တခါအေမီးခွန်းမျိုးမီးကေ အသီတေ…။ အဖြေကတော့ရှင်းရေ…။။
( မှတ်ချက်။…။ကျွန်တော့ ဦးနှောက်ကထဲက တွေးတောခဖူးရေ အဓိပ္ပါယ်ရှိရေလူ လို့ထင်ရေအဖြေကို အပိုင်း ၂ မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပီးပါမေ...)
ဖတ်လို့ကောင်းပါရေ။ အပိုင်း ၂ ကို မျှော်နီပါရင့်ဒေ။
thahlaoo March 4, 2009 at 9:55 AM
(နဲ့) အစား (နန့်) လို့ရွီးသင့်ရေ။ (နဲ့) လို့ပြောစွာက မြန်မာတိရာပြောစွာ။ ရခိုင်သားတိက (နန့်) လို့ရာပြောရေ။
mickey mouse June 12, 2009 at 11:36 PM
I came and read your post
nice composing and sharp thoughts